A ga - akpọ Debian 8.0 "Jessie" | Site na Linux
Akụkọ na-abịa otu ọnwa mgbe Wheezy jụrụ oyi. Enwere okwu nke arịrịọ maka unlocks na RC njehie ndị ka dị ọtụtụ, mana email ahụ kwụsịrị site n'ikwu na aha nke mbipute 8.0 (nke a ga-ewepụta na 2015) ga-akpọ «Jessie»Na nsọpụrụ nke nwa bebi cowgirl si Toy Akụkọ nke 2.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » A ga-akpọ Debian 8.0 "Jessie"
Gịnị bụ wheezy jụrụ?
hahaha, ntụgharị asụsụ ọjọọ nke "ifriizi." Kwesịrị Oyi ....
hahaha, kefriza. !!!
Kedu ihe ga - eme ma ha jiri aha niile si na fim ahụ?
Ha hapụrụ: Bullseye, Barbie, RC, Mr Spell na Rocky.
Tụlee na ha wepụtara afọ abụọ ọ bụla, mgbe ahụ ha ka nwere afọ 2, mana nke ahụ bụ azịza nye ajụjụ a "aha ole Debian hapụrụ?" otu osila di, a na m aju ihe ozo.
Amaghị m ihe ga-eme.
Ha ga-aga na ihe nkiri pixar ọzọ?
Ọ bụrụ na nke ahụ emee, puff. I nwere ọtụtụ ihe ịhọrọ.
N'oge na-adịbeghị anya ha na-etinye aha nwere mkpụrụ akwụkwọ abụọ n'usoro: leNNy, squEEzy, whEEzy, jeSSie
Debian ga-abụ ihe ọzọ oge ọ batara na ndepụta FSF
Ee, ọ ga-abụ ihe ọzọ. : S.
M na-atụ anya ya 🙂
Enweghị m ike ịwụnye debian n'ụzọ kwesịrị ekwesị, enwere m olileanya na site na nsụgharị ọhụrụ ahụ nrụnye na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị, ma ọ bụrụ na ejiri m nke ahụ merie sistemu 100% n'efu, m ga-enwe obi ụtọ
Ha bụ aha sitere na akụkọ egwuregwu ụmụaka, ha nwere ọtụtụ ihe odide, yana dịka ha na-ekwu ma ọ bụrụ na ha wepụta nsụgharị kwa afọ abụọ, ha ga-ewepụta ihe nkiri karịa, ma ọ bụrụ na ha agbapụ, ha ga-eji ihe nkiri eserese ọzọ.
Ogologo ndụ Devian! hehehe ...
Uff, emesịrị m nwee ike ịwụnye debian, (viva firmware-nonfree) hahahahahahahaha
Debian ihe kacha mma nke kacha mma 🙂
Emere m nkwalite mmezi na ule debian (wheezy), emelitere otutu ihe, mana a ka na-akpọ wheezy; ọ gbanweghị aha m na jessie; ụfọdụ enyemaka?
ha enwebeghị oge iji mepụta jessie repositories, nke abụọ iji kwaga n'akụkụ iji nwalee
Aghọtaghị m azịza gị ... adịghị Jessie? Egosiri m repo na jessie na source.list ma ọ bụrụ na ọ mara repo, ihe m chere (mgbe m chechara echiche maka ya otu puku ugboro), bụ na distro "jessie" adịghị adị ugbu a ma ọ bụrụ na repos; dị ka ikwu "nnwale" ọ bụghị distro, naanị repos, echere m na nke ahụ bụ ihe na jessie; kwenyesiri ike, mgbe ọ tụgharịrị nke ukwuu wee chọọ "ihe kpatara" nke okwu ahụ; ọ bụ karịa m ebudatara DVD nke echichi ule ọzọ na ọ installs "wheezy" nakwa na ọ bụ ihe doro anya; Naanị lelee ụbọchị ntọhapụ, ọ bụ Eprel 29;
na nchịkọta m na-eche na Jessie bụ nanị repos IHE NA na na distro adịghị adị ma; Kedu ihe ị chere? ma ọ bụghị na m na-aghọtaghị ihe ị dere: »abụọ iji kwaghari site sid maka ule»